About Us - Wenzhou Weihang caaga Co. Ltd
Nylon cable kulanka
Ahama Steel Lock Steel Ball Ties
Taararka Accessories Taxanaha
Wenzhou Weihang caaga Co., Ltd. waa xirfadle ku hawlan suunka nylon ah, kulanka ahama birta, saxan kulanka kulanka, nooca kuusha, tube tirada, iyo biibiilaha, filim, guntinta, clips ciddiyaha, xoog ku biiro dual, dual awood iibsiga si toos ah waxyaabaha ku biiro R & D, wax soo saarka iyo iibinta mid ka mid ah shirkadaha. Iyo in la dhiso muddo dheer xiriirka deggan iskaashi la tiro ka mid ah dukaamada iyo wakiilada. Shirkadda ayaa mishiinka weyn duray wax taaj oo kale, mashiinada baakooyinka, technology-soo-saarka sare, qalabka baaritaanka, ciidanka farsamo oo xoog leh, alaabta waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Maraykanka, Bariga Dhexe iyo dalalka kale iyo gobollada.
Shirkadda takhasusay soo saarka ee heerkulka hawlgalka cajalad nylon: -20 degree Celsius in +80 DEG C (nylon 66). Iyada oo horumar joogto ah wax keeni kara suunka nylon -40 heerkulka hooseeyo noqon doonaa. Iyada oo acid, alkali, retardant olol, cimri dherer, ningax iyo faa'iidooyinka kale. Products hubkaas ayaa loo isticmaalaa in warshad gudaha electronic, labeeyo TV, cable computer, nalal, line cable kulanka, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa decoration gudaha, beerta ku xidhxidhaynay, cable markabka gudaha u qardarin, baaskiil ama xirxirida gaari labeeyo waxyaabaha kale ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa beeraha, khudradda, farsamada gacanta iyo waxyaabo kale oo guraa. Shayga leedahay sifooyinka Soonka qabanaya, ningax wanaagsan, is quful, fudud si on si ay u isticmaalaan iyo. Noqo tiro badan oo ah shirkadaha, ganacsatada si aad u iibsato waxyaabaha la midka ah ee doorashada, laakiin sidoo kale tiro badan oo dukaamada in ay galaan Maraykanka iyo dalalka kale ee horumaray.
Shirkadaha hoggaansanaayeen ah "dunida, iyo macaamiisha guul-guul" falsafada ganacsiga, mar kasta u hoggaansamaan "qiimaha shirkadda of tayo wanaagsan, hufnaan sare iyo kharash yar" macaamiisha adduunka qabaa, oo si aada ballaariyo suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah, waxay samaysay shebekad iibka ah iyo nidaamka adeegga adeegga macaamiisha ee dalka, magaalada, alaabta waxaa loo dhoofiyo Southeast Asia, Europe iyo United States dalalka kale iyo gobolada, saamiga aad suuqa iyo heerka koritaanka iibka sii waday in ay si tartiib ah ku kici, si diiran u soo dhaweyn cusub iyo wax duug macaamiisha gudaha iyo dibaddaba u yimid inuu soo booqdo, wuxuuna ka xaajoodaa ganacsiga, si ay u abuuraan mustaqbal wanaagsan!
Cinwaankaaga: Yueqing City, Liushi ao ao Industrial Zone